တူတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မလိုဘူး
Posted by ပန်းပုံပြင် at 4:18 PM0comments
သူ့ကို သတိမရတော့ဘူးရယ်လို့ သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) နှစ်လောက်က ထင်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းတွေ တိုက်ဆိုင်တိုင်း သတိရပြီး မကြာခဏ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးရတဲ့အခါတွေလည်း ရှိရဲ့။ သူ့ကို မောင်ရေ လို့ စိတ်ထဲကသာ ခေါ်ဖူးပြီး အပြင်မှာ ရော တစ်ကိုယ်တည်းတောင် နှုတ်ကထွက်ဖို့ မရဲခဲ့တဲ့ကျွန်မ အဖြစ်က တစ်ဖက်သက်အချစ်လည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘဲ ကံကြမ္မာနဲ့ မာနကြောင့် ဆိုတာ သေချာပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဘယ်တော့မှ နောင်တရမှာ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်မဘာသာ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်း ယုံကြည်ထားပါတယ်။
သူနဲ့ စတွေ့ခဲ့တဲ့နေ့က ကျွန်မဘဝမှာ မှတ်မှတ်ရရ ကြီးမားတဲ့ အချိုးအကွေ့တစ်ခုနဲ့ နိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ နေ့လည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေ့ မတိုင်ခင်ညကမှ ဖေဖေ အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားလို့ ငိုနေတဲ့ မျက်လုံး မို့အစ်အစ်တွေနဲ့ IETS စာမေးပွဲဖြေဖို့ လျှောက်လွှာသွားတင်တဲ့နေ့ပေါ့။ တိုကင်နံပါတ်က သူနဲ့ ကျွန်မက ရှေ့နောက်လည်း ဖြစ်နေပြီး အယူသည်းတဲ့ ကျွန်မက ရထားတဲ့ နံပါတ် (၂၂) ကို တစ်ယောက်ယောက် နဲ့ လဲချင်တော့ သူ့ကို အကူအညီတောင်းပြီး သူနဲ့ နံပါတ်ချင်းလဲလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မပါလာတဲ့ ပါတ်စပို့ပုံက ရောင်စုံကာလာနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အဖြူ အမဲပုံ ဖြစ်နေတော့ သူက ကျွန်မကို အမြန်ရမယ့် ဓါတ်ပုံဆိုင်ကို လိုက်ပြရင်း ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လုံး တိုကင်နံပါတ်အသစ် ပြန်ယူခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနေ့က သူ့ကို မြင်မြင်ချင်း မချစ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရိုးသားတဲ့ မျက်လုံးတွေ၊ ကူညီစာနာတတ်မှုတွေကြောင့်လေးစားခဲ့ရတယ်။ သူ့ကို နောက်လည်း စာကြည့်တိုက်မှာ မကြာခဏတွေ့တာရယ်၊ ကျွန်မနဲ့ ကျူရှင်အတူတက်တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကတစ်ဆင့် ခင်မင်သွားတာရယ် သူနဲ့ မကြာခဏ ဆုံမိတတ်ခဲ့တယ်။ သူနဲ့ ကျွန်မက ကျောင်းလည်း မတူပြန်ဘူး။ သူနဲ့ စသိခဲ့တဲ့အချိန်က ၂၀၀၂ ခုနှစ် မိုးရာသီမှာ။ မိုးတွေရွာတဲ့ နေ့တော်တော်များများမှာ ထီးမဆောင်းတတ်တဲ့ ကျွန်မကို သူလိုက်ပို့ခဲ့ဖူးတယ်။ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး ထီးမဆောင်းတဲ့ကျွန်မကို ထီးဆောင်ထားဖို့ မကြာခဏ ပြောပေမယ့် အခြားသူငယ်ချင်းတွေလို နစ်နစ်နာနာ မပြောတာကိုလည်း ကျွန်မ သတိထားမိနေခဲ့တာပါ။
ကျွန်မနိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ လျှောက်သလို သူလည်းလျှောက်နေခဲ့တာမို့ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် တိုင်ပင်တာ၊ ဖောင်ဖြည့်တာ၊ ထောက်ခံစာရဖို့ စုဆောင်းတာတွေ ကြောင့်လည်း သူနဲ့ ကျွန်မပိုမို ခင်မင်ရင်းနှီးလာစေခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ စကားပြောရင် ဖွဲ့နွဲ့ခဲ့တာတွေလည်း မရှိပေမယ့် သူကျွန်မကို ချစ်နေမယ်လို့လည်း မထင်ခဲ့ပေမယ့် သူကျွန်မရှေ့ကနေ မပြောမဆို နှုတ်မဆက်ဘဲ ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မသူ့ကို စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမိသားစုက ကျွန်မကို အခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ သဘောမတူတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မသေသေချာချာ ပြန်ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ "သမီးမှာစောင့်နေတဲ့ ချစ်သူရှိတယ်မေမေ။ သမီးဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့" ဒီစကားတစ်ခွန်းကိုသာ ပြောနိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ သူဘယ်ရောက်နေလဲ၊ ဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတာ ကျွန်မမသိပါဘူး။ မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။ သူကျွန်မကို ချစ်လား၊ မချစ်ဘူးလား ကျွန်မ မသိခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မသေချာနေခဲ့တာ တစ်ခုရှိတယ်။ သူကျွန်မဆီကို တစ်နေ့ပြန်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒါ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ရူးမိုက်တဲ့ အချစ်ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ သူထွက်သွားပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ ကျွန်မထက်ငယ်ပြီး အရမ်းဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ကျွန်မလက်ခံလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မသူ့ကို မချစ်ပါဘူးလို့ ဘယ်လိုပြောပြော မိသားစုကရော ပါတ်ဝန်းကျင်ကပါ မယုံကြည်ကြဘူးလေ။ ကျွန်မပါတ်ဝန်းကျင်ကို ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အရာဘဲလေ။ ကျွန်မသတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ရတာပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်နဲ့ လဲလှယ်လိုက်ရတဲ့ နှလုံးသားက ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသား တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ ကျွန်မစိတ်ထဲက မောင်လို့ မြတ်နိုးစွာခေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူ့နှလုံးသားပါ အဆစ်ပါတယ် ဆိုတာ နောက်တစ်နှစ်လောက် ကြာမှ ကျွန်မသိခဲ့ရတာပါ။
ကျွန်မရဲ့ အသက် (၂၃) နှစ်ပြည့်တဲ့ မွေးနေ့မှာ သူရောက်လာပါတယ်။ သူကျွန်မအိမ်ကို လာခေါ်ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ သူကျွန်မကို ပြောခဲ့တဲ့ ချစ်စကားကိုလည်း ကျွန်မ တစ်သက်မှာ တစ်ကြိမ်သာ ကြားခွင့်ရှိမယ်ဆိုတာ သိခဲ့ပါတယ်။ အရာအားလုံးကို ကျွန်မဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ရင်ထဲမှာ တစ်ဆစ်ဆစ်နာကျင်စွာ ငိုနေပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သလို၊ ဘယ်လိုမှ မခံစားရသလို ဟန်ဆောင်နိုင်စွမ်းကျွန်မ မှာ ရှိနေခဲ့တာ ကျွန်မ မချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ချစ်သူတော်ထားပြီး နေ့တိုင်းနာကျင်နေရာက ထုံသွားလို့ထင်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် သူမသိအောင် ကျွန်မငိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကစပြီး သတိရတိုင်း၊ မိုးသည်းသည်းရွာတိုင်း ရင်ထဲမှာ နာနေပါတယ်။
ကျွန်မ သူ့ကို ပြန်ဖြေခဲ့တဲ့စကားကတော့ "ငါ့မှာ အခု ချစ်သူရှိနေတာ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်လရှိပြီ သူငယ်ချင်းရေ။ ငါတို့ သူငယ်ချင်းလိုဘဲ ဆက်ပြီးခင်ခင်မင်မင် နေကြရအောင်ပါ။" သူ့ကို ကျွန်မချစ်ခဲ့တာ စောင့်နေခဲ့တာကို အဲဒီနေ့က မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်တော့မှလဲ ပြန်ပြောဖို့ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို မနာကျင်စေချင်လို့ပါ။ ကျွန်မကို မယုံကြည်ကြတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ရွေးချယ်စရာကလည်း နည်းပါးလှပါတယ်။ ကျွန်မချစ်ပါတယ်လို့ နှုတ်ကအဖြေပေးထားတဲ့ ချစ်သူအပေါ် စောင့်ထိန်းမှုနဲ့ သစ္စာတရားတော့ အနည်းဆုံးပေးရမယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်မကြောင့် ကျွန်မချစ်သူကို ဝမ်းနည်းနာကျင်မှုမှ ကင်းဝေးပါစေ လို့သာ ဘုရားမှာ ဆုတောင်းရင်း သူပြောပြတာတွေ နားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။ သူကျွန်မကို ချစ်ခဲ့တာကို သိရတဲ့အတွက် ကျွန်မအတွက် အင်အားဖြစ်စေခဲ့တာ ကြောင့် သူ့ကို အမြဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူက အမေစကားကို အရမ်းနားထောင်တဲ့ သားဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မကို ချစ်ကြောင်းဖွင့်ဟဖို့ကို အချိန်နောက်ကျသွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းပြောပါတယ်။ ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ အသက် (၂၄) မှ ရည်းစားထားမယ် ဆိုတဲ့စကားကြောင့် ကျွန်မစဉ်းစားဖို့ အချိန် (၁) နှစ်တိတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ အသက် (၂၃) နှစ်ပြည့်တဲ့ နေ့မှာ လာပြောပြတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြတဲ့ အခါ သူ့ကို ကျွန်မ မလေးစားဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မအတွက် စဉ်းစားပေးတဲ့သူ့ကို ချစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပိုတောင်မှ မပြောရက်ပါဘူး။ ကျွန်မပြောလိုက်ရင် သူပိုနာကျင်သွားတော့မှာ။ ကျွန်မကလည်း အကြောင်းတစ်စုံ တစ်ရာမရှိဘဲ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ လက်ရှိချစ်သူကို စိတ်ဆင်းရဲစေပြီးမှ ရယူမယ့် ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို မယုံကြည်ပါဘူး။ သူနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုတော့ ကျွန်မ မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ "နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ငါတစ်သက်မှာ တစ်ခါဘဲ ပြောမယ် နောင်လည်း ထပ်ပြောမှာ မဟုတ်လို့ တကယ်လို့ နင် အခု လက်ရှိတွဲနေတဲ့ ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တဲ့ အခါငါ့ဆီ ပြန်လာခဲ့ပါ။ ငါနင့်ကို ချစ်ပါတယ်လို့ နှစ်ခါ မပြောဘူး။" ကျွန်မအဲဒီစကားကို ကြားရတဲ့ အချိန်ကတည်းက သိခဲ့ပါတယ် သူနဲ့ ကျွန်မဘယ်တော့မှ ဆုံဆည်းတော့မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပါ။ ကျွန်မရဲ့ မာနက အဲဒီ နှစ်ခါစကားမပြောမယ့် သူ့ကို ကျွန်မအခြားတစ်ယောက်နဲ့ ပြတ်ပြီး သူ့ရင်ခွင်ကို ပြန်ဝင်ဖို့ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ခဲ့လို့ပါ။ အဲဒီကတည်းက ကျွန်မမွေးနေ့တွေမှာ ကျိန်စာသင့်သွားခဲ့ပြီလို့ သိလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကျွန်မနိုင်ငံခြားမှာ ရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာ သူ့ဆီက သူငယ်ချင်း မေတ္တာသန့်သန့်လေးနဲ့ ပို့ပေးတဲ့ အားပေးတဲ့ စကားတွေ၊ ဖုန်းမက်ဆေ့ဂ်ျတွေကို ကျွန်မ မြတ်မြတ်နိုးနိုး လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့ ပါတ်သက်တာအားလုံးကို ကျွန်မ မြတ်နိုးစွာ သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပေမယ့် သူ့ထံကို ဘာမတ်ဆေ့ဂ်ျမှ တုန့်ပြန်ပို့ပေးခဲ့ခြင်း မရှိတာ ကျွန်မဘက်က ချစ်ခြင်းတွေကို သူသတိထားမိသွားမှာ၊ သူသွားမယ့်လမ်းမှာ နောက်ဆံငင်မှာကို ကျွန်မအလွန် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခဲ့တာမို့ပါ။ ကျွန်မဘယ်တော့မှ သူ့ကို ချစ်ပါတယ်လို့ ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း သူ့ကို သတိရယုံသာ။ သူပြောခဲ့သလို ကျွန်မချစ်သူနဲ့ ပြတ်စဲခဲ့တဲ့ အချိန်မှာလည်း ကျွန်မသူ့ကို ပြောပြဖို့ ကျွန်မရဲ့ မာနက ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။
အရာရာဟာ ဘဝမှာ သူ့အချိန်နဲ့ သူဆက်လက်သွားနေပါတယ်။ ဖေဖေ ကျွန်မကို တစ်ချိန်က သင်ပေးခဲ့သလို သူ့ကို ပြောပြခဲ့ချင်ပါတယ်။
"အချစ်မှာ မျက်စေ့ မရှိပါ။ အချစ်ဆိုတာ ခံစားချက်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်တွေ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါ ဘဝ ကို ဘဝ အတိုင်း ဆက်လျှောက်ရတာပါ။"
ကျွန်မကတော့ သူ့ကို ချစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် နောင်တလည်း မရှိပါဘူး။ သူ့ချစ်သူဖြစ်ခွင့် မရှိတဲ့အတွက်လည်း နောင်တမရပါဘူး။ တစ်ချိန်မှာ သူ့ကို အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ကို သူပိုင်ဆိုင်ရပြီး သူလိုချင်သလို သာယာတဲ့ မိသားစုလေး တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ရပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးရင်း သတိရရင် သူရော အဒေါ်တစ်ယောက်လို ခင်မင်ခဲ့တဲ့ သူ့မေမေကိုရော မေတ္တာပို့ပေးခဲ့ရုံသာ ကျွန်မရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကို ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မစောင့်စည်းခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ သစ္စာတရားနဲ့ သူ့ကို ချစ်တဲ့ အချစ်တွေ တကယ်မှန်ကန်ခဲ့ရင်တော့ အခုအချိန်မှာ သူဟာ တောင့်တကင်းစွာ၊ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ သူ့ဘဝကို ကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာ ဖြတ်သန်းနေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ချစ်သူက နှလုံးသားထဲမှာ ဖြတ်သွားတဲ့အခါ ဒဏ်ရာတွေ မချန်ခဲ့ဘဲ ခြေရာတွေသာ ချန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခြေရာတွေကလည်း ပန်းပွင့်ခြေရာတွေသာ ဖြစ်နေတာမို့ ကျွန်မအရမ်းကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။
Posted by ပန်းပုံပြင် at 2:49 PM0comments
ဘာမှ ရေးမထားတဲ့ စာရွက်
ဘာမှ မရှိ နတ္ထိ
ဘာမှ မရှိတဲ့ အဖြူထည်
ကွပ်လပ် က လက်တွေ့မှာ
Posted by ပန်းပုံပြင် at 3:33 PM0comments
ဖေဖေက ငယ်ငယ်တုန်းက ပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံပြင်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေက အများသား။ ဖေဖေက စကားပြောကောင်းသည်။ သူတို့ မြို့ကလေးမှာ မင်းမူခဲ့သော ကွန်မြူနစ်များ အကြောင်းတော့ ဖေဖေက မကြာခဏပြောဖြစ်သည်။
"ကွန်မြူနစ်ဆိုတာ တကယ်က လူဆိုးလူပေတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့ သမီးတို့ ကြည့်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို လူကြမ်းလူရိုင်းတွေလဲ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ က စကားပြောကောင်းတဲ့ လူရည်လည်ပြီး၊ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နေတတ်ကြတဲ့ ပညာတတ်တွေ။ ဗိုလ်အောင်ဒင်ဆိုတာ ရုပ်ရှင် တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ဇာတ်လိုက်မင်းသား သက်သက်မဟုတ်ဘူး။ အပြင်မှာ တစ်ကယ်ရှိခဲ့တာ။"
ဖေဖေသည်လို စပြောပြီဆိုရင် သူတို့ တွေ ရခိုင်ရိုးမတောထဲမှာ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ နေထိုင်ကြတဲ့ ပုံတွေကို လည်း နောက်ကြောင်းကို ပြောပြတတ်သည်။ သူတို့ တွေ တောထဲမှာ တစ်မိုးတွင်းလုံး ပုန်းအောင်း လို့ နေကြတာ က ဘယ်လို ကြမ်းတမ်းပြီး ရာသီဥတု ဆိုးရွားတယ်။ လူတွေဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက် ကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲ နေပြီး အသေခံခဲ့ကြတဲ့ သူတွေ စတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြ တတ်သည်။ နောက်တစ်ခု ဖေဖေပြောတတ်တာက ဖေဖေ့အဖိုး အကြောင်းဖြစ်သည်။ သူက တစ်ကယ်တော့ ရွာမှာ သြဇာရှိသူ။ သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူက ကွန်မြူနစ်တွေကို ထောက်ပံ့ရိက္ခာတွေ ပေးခဲ့သည်တဲ့။ သူတို့ ပုန်းအောင်းနေစဉ်တွင် သုံးရန် ပစ္စည်းပစ္စယတွေ ဝယ်ပေးခဲ့သည်တဲ့။ ဖေဖေပြောဖူးသော စကားများတွင်-
ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ အသက်က မှန်ဘဲသမီး။ သူတို့ တစ်မိုးတွင်းလုံး ပုန်းနေပြီ ဆိုရင် အဖေ့အဖိုးက သူတို့ကို အဓိက ဝယ်ပေးခဲ့ရတာက မှန်တွေဘဲ။ သူတို့က မိုးတွင်းဆို ရခိုင်ရိုးမက သစ်ပင်တွေမှာ သစ်ပင်နှစ်ပင်ကြားမှာ ပုခက်ဆင်ပြီး ပုခက်ပေါ်မှာ မိုးကာအုပ်လို့ နေကြရတယ်။ ကျွတ်တွေကလည်း သစ်ပင်ပေါ်က တစ်ဖြုတ်ဖြုတ်ကျ နေသတဲ့။ သစ်ပင်တစ်ပင် တစ်ယောက်ဆိုတော့ ပျင်းတာပေါ့။ အောက်လည်း ဆင်းလို့ မရဘူး။ စကားပြောဖော်ကလည်း မရှိ။ အဲဒီတော့ သူတို့ ပုခက်ပေါ်မှာ မှန်တွေကြည့်ပြီး တရားဟောကျင့်ကြတယ်တဲ့။ တစ်မိုးတွင်းလုံးကို ငှက်ပျောဖက်တွေ ကို ရေအစား ဝါးကြရတယ်။ မိုးကုန်လို့ ရွာတွေပေါ်ကို လာပြီဆိုရင်တော့ သူတို့က အပြောအဟောကောင်း တဲ့ သူတို့တွေကို ရွာခံတွေက ချစ်ကြတယ်တဲ့။
ဒါကဖေဖေပြောပြဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေထဲက အချို့သာပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကျွန်မသူတို့ကို သနားခဲ့ဖူးသည်။ ဖေဖေကိုယ်တိုင်လည်း ကွန်မြူနစ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း။ တောခိုဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဖေဖေ့ကို အဖေ့ရဲ့ အဖေက အတင်းကျောင်းထားခဲ့ရ။ ရန်ကုန်ကို ပို့ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေက မကြာခဏ ကြားခဲ့ဖူးတယ်။ ဖေဖေနဲ့ အမြဲစကားပြောတဲ့ အခါ တိုင်းရေး ပြည်ရေးကို ဖေဖေက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့အခါ သူပြောတဲ့ အယူအဆ တစ်ချို့ကို ကျွန်မလက်ခံသဘောကျခဲ့တာတွေ ရှိသည်။
ငွေအတွက် ဘယ်တော့မှ ဦးညွှတ်မပေးနဲ့ သမီး လောကမှာ ပြန်ဝယ်လို့ မရတဲ့ အရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဖေဖေပြောပြမယ် လောကမှာ လူသားဆန်ဖို့က အဓိက။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်စရာမလိုဘူး။ သမီး ပြောချင်တာကို ပြောလို့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သမီး မျှမျှတတတော့ ပြောရမယ်။ မတရား မလုပ်နဲ့။ သမီး ပြောထားတဲ့ စကားကို တာဝန်ယူရမှာ သမီးကိုယ်တိုင်ဘဲ။
စတဲ့စတဲ့ စကားတွေကို နားရည်ဝ နေတဲ့ ကျွန်မကို သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေ က ကွန်မြူနစ်မ လို့ သမုတ်ခဲ့ ပြောဆို စောင့်ကြည့်ခဲ့ ဖူးတယ်။ အရွယ်ရောက်လာလို့ အိမ်ကနေ ထွက်လာပြီး တဲ့ အခါမှာ ဖေဖေ့ကို အခြား တစ်စိမ်း တစ်ယောက်ရဲ့ မြင်နဲ့ ပြန်ကြည့်တတ်လာတဲ့အခါ ဖေဖေ ပြောခဲ့တာတွေ အားလုံးကို ဖေဖေ မကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အကြောင်းက တစ်ရေးရေး ပေါ်လို့သာလာတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေ အကြောင်းကို မစဉ်းစားဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာရတော့တယ်။ ဖေဖေ့ရဲ့ အဖိုးက ကွန်မြူနစ်တွေ သုံးဖို့ အသုံးအဆောင်တွေကို တော့ ဝယ်ပေးပြီး သူ့သားသမီး မြေးတွေကို တော့ ဘာကြောင့် တောခိုတဲ့ ကွန်မြူနစ် တစ်ယောက် မဖြစ်စေချင်ဘဲ ပညာတတ် တစ်ယောက် ဖြစ်စေချင်ခဲ့သလဲ။ အဲဒီ စကားပြောကောင်းတဲ့ သူတွေကို စကားပြောကောင်းအောင် ကျင့်ဖို့ ကြည့်မှန်တွေ ဝယ်ပေးပြီး ဝယ်ပေးတဲ့ သူကိုယ်တိုင်က သူတို့ ပြောခဲ့တဲ့ တရားတွေကို မယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကို ဒီလူတွေ သိသွားကြသလား။ မသိခဲ့ကြဘူးလား။ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ ဒီစံနစ်ကြီးစိုးတဲ့ နေရာအားလုံး လိုလိုမှာ အရင်းရှင်စံနစ်က နေရာဝင်ယူလာနိုင်ကြသလဲ။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သူတို့ ပြောတာကို လူတွေက မယုံကြည်ဘဲ သူတို့ကို ပုံပြောကောင်းသူတွေလို့သာ သတ်မှတ်ထားလို့လား စတာတွေကို ကျွန်မတွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ က မရိုင်းစိုင်းဘူး ဆိုရင် ဘာကြောင့် သူတို့ လူတွေ အများကြီး သတ်ခဲ့တာလဲ။ အသက် ၃၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ လိုက်မမီခဲ့တဲ့ နားမလည်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးလေ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ယုံတမ်းပုံပြင်မျှသာ ဖြစ်ခဲ့ပြီလေ။ ဘာစာအုပ်စာတမ်းမှ မီငြမ်းစရာ ဒီနေ့ အချိန်အခါမှာ ဘာလို့များ မကျန်ခဲ့ဘဲ ဗိုလ်အောင်ဒင် တစ်ယောက် တစ်ကယ် ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာ ဖေဖေ့ထံမှသာ ကြားရဖူးတဲ့ ကျွန်မအတွက် တော့ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် စဉ်းစားဖို့ အချိန်မရှိတော့ တဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် ခေတ်တစ်ခေတ်မှာ ရောက်နေတော့တဲ့အခါ ဖေဖေဟာ ပုံပြောကောင်းသူတွေထဲက တစ်ယောက်မျှသာ ဖြစ်ရတော့တယ်။
Posted by ပန်းပုံပြင် at 11:59 PM0comments
အခုတလောမှာ စိတ်ထဲမှာ တွေးမိနေတာတွေက မြစ်တွေ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ မြစ်တွေ မြစ်တွေ၊ ရစ်ခွေစီးဆင်းနေရဲ့၊ ဖြောင့်တန်းစွာ စီးဆင်းနေရဲ့၊ လှပစွာစီးဆင်းရဲ့၊ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် ကြမ်းတမ်းစွာစီးဆင်းရဲ့၊ မြေကမ်းတွေကို တိုက်စားသွားရဲ့၊ မြေနုကျွန်းတွေ မြေသြဇာတွေကို ပို့ချရဲ့။
ဒါပေမယ့် မြစ်ဆိုတာက ဆီးဆင်းနေမှ အသက်ရှင်ရမှာပါ။ စီးဆင်းမှုက ကြမ်းတမ်း သည်ဖြစ်စေ၊ နူးညံ့ သိမ်မွေ့သည် ဖြစ်စေ၊ မြစ်ဆိုမှတော့ စီးဆင်းရမှာဘဲ မဟုတ်လား။ မြေတွေ တိုက်စားသွားတာ၊ အနည်တွေ ပို့ချသွားဖို့ မဟုတ်လား။ တိုက်စားသွားသည့် အနည်တွေကိုလဲ ယူဆောင်ပြီးရင် တစ်နေရာမှာ လွှတ်ချခဲ့ရတာဘဲ။ မြစ်ဆိုတာ ရစ်ခွေသွားချင်သွားမယ်၊ ဒါပေမယ့် မကောက်ကျစ်ဘူး။ မြစ်ဆိုတာ သယ်သွားချင်သွားမယ်၊ ဒါပေမယ့် မလှည့်စားဘူး။ အားလုံးကို ပြန်ပေးတယ်။
စီးဆင်းမှုတွေကို ရပ်တန့်ပေးလိုက်ရတာနဲ့ မြစ်တစ်ခုဟာ နိဂုံးချုပ်ခံလိုက်ရတယ်။ အသက်ခံလိုက်ရတယ်။ အဆုံးသတ်သွားရတယ်။ မြစ်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ပျောက်ဆုံးပေးလိုက်ရတယ်။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း စီးဆင်းတဲ့ မြစ်က စီးခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့လား။ ရေလျံစေတဲ့ မြစ်ကို ပိတ်ပစ်ရမယ်တဲ့လား။ ရေတိုက်စားတဲ့ မြစ်က မစီးရဘူးတဲ့လား။ ဒီရေတွေ နောက်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ မြစ်ကို ကောစေရမယ်တဲ့လား။ လူတွေ ရေကြောင်းသုံးလို့ မရတဲ့မြစ်က အသုံးမကျဘူးတဲ့လား။ မြစ်ကိုပိတ်မှ အလင်းရောင်ရမှာမို့ မြစ်ကသေပေးရမယ်တဲ့လား။ မြစ်မရှိမှ .......... စတာတွေ ရမှာမို့ မြစ်ကို ကြိုးစင်တင်ရမယ်တဲ့လား။
“လူမှာ လူ့အခွင့်အရေး ရှိသလို၊ မြစ်တွေမှာ မြစ်အခွင့်အရေးရှိတယ်။ ငါတို့ဟာ မြစ်တွေဖြစ်တယ်။ ငါတို့ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းရမယ်။ ငါတို့ မြေသြဇာတွေ သယ်ပို့ပေးရမယ်။ ငါတို့ရဲ့ အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ရေတွေ သယ်ပေးရမယ်။ ငါတို့ သဘာဝတွေ၊ ငါတို့ သားစဉ်မြေးဆက်ရဲ့ အမွေ အနှစ်တွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ ငါတို့ သမိုင်းတွေ ဒီမြစ်တွေထဲမှာ ရှိတယ်။ ငါတို့ မြစ်တွေ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းပါစေ။”
Posted by ပန်းပုံပြင် at 1:51 PM0comments
Flowers in the Grass Ledgend (5)
Photographer: Pan Pon Pyin
Posted by ပန်းပုံပြင် at 1:49 PM0comments
Flowers in the Grass Ledgend (4)
In an early morning, dew drops visited to earth. The grasses host them for the morning and explained about the world. The flowers in the grass land made friend with the tiny drops of water. They shared freshness, beauty and the elegence of their partnership. In that morning, they createdaperformance art show named "Dewellers on Earth".
Posted by ပန်းပုံပြင် at 1:35 PM0comments
Flowers in the Grass Ledgend (3)
မြက်ပင်တွေ တစ်နေ့တစ်ခါ နှင်းရည်သောက်
ငါကမင့်စကား ကြားလည်း ကြားချင်
(ဂျပန်ကဗျာတစ်ရာရဲ့ ကဗျာတစ်ရာ မှ)
Posted by ပန်းပုံပြင် at 1:27 PM0comments
Flowers in the Grass Ledgend (2)
In the dark of the night,awinter, the grasses whispered. They had an assembly of how they will make their debutante of the year. The little flowers in the grass were excited of how they can manage to make the mother earth more beautiful. Yes, they had been discussing about how they will bloom and when. Who will go when? They were deciding their time and period. The little insects and crickets were giving applause that the little awake and traced their path in the morning.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 1:05 PM0comments
ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ နေဝင်ချိန် အလှက
ခူးယူသူရဲ့ ဘဝနဲ့ ဆိုင်သတဲ့လား
မြေပေါ်မှာ ၊ ရေထဲမှာ
နေရာတိုင်းမှာ လှနိုင် တဲ့ပန်းက
Posted by ပန်းပုံပြင် at 11:48 PM0comments
Flowers in the Grass Ledgend (1)
"A weed is no more thanaflower in disguised." There are flowers in unexpected corner of our life that are waiting for us to enjoy but we usually skiped it.
There are colours that awaits us to see but we usually omitted it.
Thre are beauties in nature but we need to regonize.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 3:46 PM0comments
Cast in the shape of scent or suggestion;
over, along night’s avenue streaming,
as hope or moth above street-lamp flying,
paradise flutters the evening air.
Is it the almond’s coral bay
which beckons both the heart and eye
to fabled continents of pearl
where paradise gardens sway with the wind?
Caught inacrochet of leaves and tresses-
a conjured trellis of gold and green-
close to the touch yet not for touching,
paradise hovers an inch out of hand.
So April ends and the charm is over.
One dawn within the shaken boughs
we findadeath’s-head choked with blossom….
paradise gardens fall in the wind.
There wasatime Indian Lilac blomming daringly inasummer. But before that flowers were even waiting to bloom, there wasaperson who listened someone's secret dream.
What could be the dream ofalittle girl three years ago? Whom did she trust and open her heart? Now, these are not important at all. Whom, did I trust? May I ask myself again. Is thereaposibility she can manage with? It is not important at all. However, the only important thing is to carry on.
One may not notice that receiving trust from someone isaresponsibility to maintain the trust.
Withaheartfull of love andapocketfull of dreams,
Posted by ပန်းပုံပြင် at 6:05 PM0comments
Life in Parallel Frames
There is somewhere I could hide my happiness and sadness duringatwo years stay inavery colourful and peceful town. That isapaint-brush andapaper with blocks on it to rander all my emotion with colours.
If our life be straight lines paralle to each other never intertwine, there is still an enormous attraction for all of us that might be likeahurricane orablack hole. Our colour of life rander around that enormous attraction. The space of these strips differ with some havingabigger place and some have to move on as thin and fast lines. The colour of our lives changes but not in the same pattern. Some moves wildly from one to another, some would change harmoniously, some with contrast and some mildly mixing with others.
But there are still lives that could not bear the full and have to take outapiece to rander with completely different colou from its own life. As an artist, I would simply wish our earth would be more colourful and composed beautifully with all different shapes, colours and pattern from every strip of colours around us.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 3:11 PM0comments
ကျောင်းသွားဖေါ် နှင့် ဒင်္ဂါးပြား
ဝေး ကွာမှုတွေရဲ့ နိဒါန်းကို
ငြိမ်းချမ်းခြင်း ရဲ့ အစလို့
ငါတို့ သတ်မှတ်ကြတယ် ဆိုပါစို့
တစ်လှေတည်း စီး တစ်ခရီးတည်းသွား သမို့
ပြုံးပန်းတို့ ပွင့်စေသတည်း ။
Posted by ပန်းပုံပြင် at 6:20 PM0comments
In art, as in literature, ugliness rendered with compassion is beauty.
W. Joe Innis, Artist
There was in December 2007, Annivesiry of Faculty of Agriculture was held. There wasafriend place that attracted me so much. That was the display of lilies.
There were stalks entangled among each other to make them intoaknot. It wasavery simple arrangement that just put the whole plant intoapot and tied intoaknot of flowers. There wasafeeling of entangle. It makes me smother to see that knot of flowers but it is amazingly simple and natural decoration that is attractive.
In life, I always felt entangle or supressed but it is part of me. I have to communicate and cooperate to makeasimple yet beautiful compromise with others though it may restrain my freedom. Yes, I want to be part of the knot of flower to creatabeautiful place around me.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 4:57 PM0comments
Labels: Social, thought
* Dhamayangyi Temple at Dawn from Shwe San Daw Pagoda.
A morning in March 2007, there wasagirl travelling in Bagan with hope, expectation and courage for the challenges that will come to her for the next two years.
Her uncle, Saw Yan Naing, told her at that time that the uprising pagodas everywhere in Bagan isacivilisation that is the most distinct glory in Southeast Asia. This is the only one archaelogical site in the histroy with enormous brickworks in Southeast Aisa.
He said, the long lasting civilization with full of glory needagreat work and tookalong time to build up. Yes, of course the people of Bagan built up the city from time to time and it took about 400 years for the civilization to get to the most beautiful and prosperous stage. It took the life time of about five generations. But if those people did not improve the knowledge, system and skills knowing that the results will not come back in their life time, will there beawonderful civilization?
With that tought, I whispared myself, "Be patient, be patient, be patient and have preseverence to overcome the struggle. It is not buildingawhole civilization, it is just goingastep forward, it should not be difficult at all because there will be friends and collegues sharing the task with us."
*These pictures were taken from Shwe San Daw Stupa at dawn.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 5:54 PM0comments
If I wereaflower, .......
These pictures were taken when my heart was broken. I thought if I wereaflower, will I be heart broken when someone leaved me alone?
If I wereaflower, will I be crying when all the expectaion gone away?
I think that I am not as fragile or as short-lived asaflower.
Why those teary eyes shedding the juice of heart when I lost someone?
I think the flowers would have experienced that so many people just stop and hadaglance and then leaved.
If they cry for everyone who glanced at them, will they be still beautiful?
A flower does not bloomed dedicating to someone like human beings that they can decorate the earth more than other things. May be that is why they can givearadiant of beauty, the glory of earth that comes from the gallant act. Blooming ofalower itself is adventurous effort being unkonw about thier future, whether they will be picked up by some one or will they wilted and die. They don't know who will pick them up or what kind of intention that bypassers will have. How they will disappered isapuzzel but they still glow their lives to give out glory on earth. They come on to earth withoutafail. It isasmall flower that have courage and glow with elegence.
I can't think why I am crying and cannot brave likeaflower. I live longer thanaflower and have plans in life. A flower does not come withaplan but with courage. So, I have tears when my plans does not meet with reality. If I wereaflower, I will not cry and just giveabeautiful smile to fill the earth with my beauty.
However, these flowers infront of me were very beautiful that I stopped crying and gazed at them. They are with similar range of colour. They have so many different shapes, colours and character but they are equally beautiful. If I were I flower, I will never compete with anyone or any flower because I am the daughter of earth and other flowers will be my sibilings.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 11:57 PM 1 comments
Labels: nature, strength, thought
A Homeless Evening
There is notasingle star, where will be the moon?
Notapiece of cloud, where will be the cover from glare?
Please notasingle bird,
for there isapair of teary eyes with full of expectation.
Where will be my hide-out?
Some say thataheor just roam around,
May I not beahero.
May I beabird who can go back home for every single flight.
Even the flowers in my mother's garden will cry
if I don't haveaplace to lie.
Please, all the lullabies come to me,
foragirl longing for home.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 10:14 PM0comments
Enriching and Preserving
If colours are made to be attractive,
If I were choose to beaflower, I would rather be white that anyone can put any colour they would desire and be peaceful. But inaculture........
If flower representsaculture ofanation, will we be white flowers or colourful flowers? Is that white means innocent, gracefulness and purity? Or is that mean unicolour, colourless and boaring? So, where is the beauty of cultural diversity? Sometimes I long for purity but for the culture, certainly I don't want my culture be pure. I would appreciate diversity. Some say that impurity means disguised but I would rather be disguised in culture than confront with others. Then what? Where will be my tridition, custom and culture in the age of globalization.
So, where is an answer for that cultural diversity and purity. How to accept? Where to accept and where to say no? Yes we really don't haveaclear cut solution. So, how our society will be going intoaunity without conflict?
If we don't mix and pure in each of our culture and unite together? If you say that I amacocktail, I would rather accept because the combitnation of same colourless species seems lack of interst and I think we need color to mix in this cluster.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 3:39 PM 1 comments
Labels: community, culture, thought
The Mount Popa of Myanmar
Mount Popa, an extinct volcano in Kyaukpadaung, near Bagan.
Cliff of Mount Popa is about 2417 feet above sea level with 777 stairs to go up the hill.
The Mount Popa stands in Kyaukpadaung Township in central dry zone. It is an extinct volcano about 4950 feet above the sea level. The mountain is famous for its yellowish flowers called Sagawar and rich varieties of its flora and funna. The cliff of Mount Popa is also famous in the legend of Myanmar thirty-seven Nat stories.
There are thousands of vistors to Popa mountain for so many different reasons all around the year. Some are for the Nat festivals, historical research, holidays and environmental research around the mountain. This is one of the earliest community forestry projects in Myanmar. The restoration of habitats in Mount Popa starts around 1970s.
In the songs and poems as early as Bagan era (1240s) and up till now, the yellowish flowers from Popa is still famous. The heories from the kingdoms are sent to Popa as messengers for plucking the flowers. The legendary heories in Bagan and Ava were around Popa in the stories with the beautiful girls from Popa mountain. The cliff of Popa is the place in the ledgends where the beautiful girls were waiting for their husband or their beloved. The stories were not happy endings of course. What was the cause of tragedy in these stories? Some people may answer that it is the fedual system. I would like to answer the cause of these repetitiveness of dramatic tragedy is that superstition and unawareness of gender equity.
I would like to mean that the Popa mountain stands as Mount Olypus of Myanmar having so many female Nats and stories of repetitive tragedy because of gender inequality. Now, in the days of 21st century, people still carrying the trait of superstition and gender discrimination inadifferent costumes. Under different skin, ethnicity and colours, we have so many tragedies because of unawareness. How long these beautiful flowers in Popa will still falling with the wind? How long shall we take these tragic histroy along with us? How long shall we still give compensation to our mistreat or unfair judgement to those legendary girls by worshiping or giving respect in our society? Yes, we have so many questions yet not have answer to us in our society.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 4:13 PM0comments
There wasaday in February, I wandered in the campus feeling despair. There wasatree blooming orange red flowers near the red temple I like. It is the flame of the forest, the symbol of our university. I remember the time I climbed the tree nearalittle stream to pluck the flame of the forest. At that time I was nine. I felt for love. I missed my grandma. It isavery significant flower in my grandma's life.
She was sixteen and my grandpa was fifty-four, she fell in love with my grandpa taking outdoor pictures in the forest in front of grandpa's bungalow. It wasatime when there were flame of the forest blooming brightly. She got married with him no matter whatever people around her refused. She hadablind love rejecting all her opportunity andastudent life asamedical student. She finally divorced with my grandpa after fourteen years hearing he said to her that the monkey he brought up is scaring him then. She managed herself to get three degrees, two diplomas andamaster and proved her ability to her ex-husband and in-laws. How did she manage her emotion, feelings and love? I think, the flame of the forest would have burned her heart and life. How did she face life with the little children and asadivorced wife? Her decisions and the way she lived was too bold to me. I can't imagine is there other way for her to live peacefully in life. I am not sure.
When I see the flowers blooming as if burning in the middle of the day, I remembered to look at my heart and problems again. Is itabig scar like the problem that grandma faced? I have courage to reconsider the problems in my life and felt that I am not that bad in life. However, the flame of the forest reminds me ofagirl who passed the same problems with me much earlier on earth.
Posted by ပန်းပုံပြင် at 10:12 PM0comments
ကျွန်မအသုံးပြုခဲ့တာ ရှစ်နှစ်ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ ရေဆေးဗူးလေးနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ပန်းချီကား
လိုက်မှာလားကွယ့် ချစ်တဲ့သူ လာသွားစို့လေ မိုးရွာနေ...
ဘဝကို လိပ်ပြာလုံစွာ၊ ဂုဏ်ယူစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူတယ်။နောက်ပြီး ဘယ်လောက် ပညာတတ်နေပါစေ၊ တော်နေပါစေ၊ မိန်းမပီသချင်တယ်။
နွေးထွေးပျူငှာစွာ ကြိူဆိုပါတယ်။ စေတနာအလျောက် ဝေဖန် အကြံပြုချင်တာများရှိရင်လည်း လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိူင်ပါတယ်။